I-Hangout Spy App - Hlola Ingxoxo Ye-Hangout, Amavidiyo Wezithombe Nezakwethu
Uhlelo lokusebenza lwe-Google Hangout Spy - Gcina I-Text Text ne-Shared Media ku-App ye-Hangout
I-Google Hangout iyisicelo se-Messaging esheshayo esikuvumela ukuba ukhulume nabantu bakho abalulekile ngokusebenzisa imiyalezo, izingxoxo zeqembu, izingqungquthela zevidiyo kanye nokwabelana ngezindaba. I-TheneneSpy ihlola zonke izingxoxo kanye nokwabelana ngemidiya kwenzeke kudivayisi eqondiswe nge-Hangout app.
Hlola ku-Google Hangout nge-TOS Hangout Spy App
TheOneSpy I-Hangout Spy Isici sivumela umsebenzisi ukuqapha izingxoxo ngabanye neqembu kanye nezithombe namavidiyo abiwe. Ukuze usebenze i-Spy ku-Hangout sici, kudingeka susa idivayisi yakho ye-Android noma jailbreak idivayisi yakho iOS.
I-TheOneSpy ku-App ye-Hangout Ivumela Umsebenzisi:
Funda imiyalezo yangaphakathi nangaphandle
Ukuqapha iqembu lixoxa
Buka izithombe namavidiyo abiwe ku-Hangout
Landelela oxhumana nabo be-Hangout futhi uhlu lwabangani
Gcina imilayezo, izithombe, namavidiyo ku-akhawunti ye-intanethi
Indlela Yokuhlola Ingxoxo Ye-Google Hangout ku-Android Smartphone ne-TheOneSpy App?
Uma usuvele Faka uhlelo lokusebenza lwe-TheOneSpy kudivayisi ehlosiwe noma e-Jailbroken ehlosiwe, isici se-Hangout sici sizoqala ukulayisha ulwazi olugcinwe ku-Hangout lokusebenza Iphaneli yokulawula yomsebenzisi we-TOS. Umsebenzisi angathola leyo datha nganoma isiphi isikhathi ngokungena kwi-akhawunti yayo ye-TOS.
Khetha Ingxoxo ye-Hangout kusuka kwimenyu ephezulu yokunqamuka kwesokudla bese uhlola zonke izingxoxo ezenzelwe i-akhawunti ye-Google Hangout. Izokubonisa yonke ingxoxo yombhalo, izithombe ezabelwe, ama-vidoes ne-emojis.
Hlola Izinto Ezimangalisayo Sinikeza Nge-Hangout Spy App?
Kungani Udingayo ThOneSpy WhatsApp Ukuhlola Software?
Kufana neningi lezinhlelo zokusebenza ze-Messaging Instant, i I-Google Hangout ivumela abantu ukuxhumana nabanye emhlabeni wonke ngaphandle kwesihlungi. Ingane yakho ingasondelwa yizihlukumezi noma izingane ezidliwayo futhi imiphumela ingacabangela. Lolu hlelo lokusebenza lukusiza qinisekisa ukuphepha kwenzalo yakho futhi ikuvumela ukuthi ugcine amathebhu kumngane wakho womshado okungenzeka abe nomuntu ongashadile naye. Ngokufanayo, abasebenzi bakho bangase baxoxe nabaphikisanayo futhi babelane ngemininingwane ebalulekile yenkampani nge-Hangout. Kuzo zonke izinkinga zakho, kunesixazululo esisodwa kuphela seTheOneSpy.
2 ngokusekelwe ku 4 amavoti
I-Hangout Spy App